यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा धनि अभिनेत्री – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २५ श्रावण २०७७, आईतवार २०:११
एजेन्सी – बलिउडमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने अभिनेत्रीहरुमा दीपिका पादुकोण र अनुष्का शर्मा जस्ता अभिनेत्रीहरुको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । पछिल्लो समय कुनै पनि फिल्ममा नदेखिएकी अनुष्का शर्माले उत्तिकै कमाई गरिरहेकी छिन् । उनले ‘पाताल लोक’ र ‘बुलबुल’ को प्रोड्युसरको रुपमा काम गरेकी अभिनेत्री शर्माले निकै राम्रो काम गरिरहेकी छिन् ।
आलिया भट्ट पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने अभिनेत्रीको पहिलो नम्बरमा आउँछिन् । उनी सन् २०१९ को फोब्र्सको सूचिमा समेत सामेल भएकी थिइन् । उनको पछिल्लो कमाई ५९.२१ करोड रहेको छ ।
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडा जोनास पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने अभिनेत्रीको टप १०० को सेलिब्रेटीको सूचिमा पर्छिन् । उनी ४९ नम्बरबाट १४ औं मा आइपुगेकी छिन् । पछिल्लो समय प्रियंकाको कुल कमाई २३.४ करोड थियो । उनको इन्स्टाग्राममा धनिको सूचिमा २०१९ की सबैभन्दा धनि भारतीय सेलिब्रेटीको रुपमा पनि नोमिनेसन भएकी थिइन् । उनी पछिल्लो समय इन्स्टाग्रामको एउटा पोस्ट बराबर १.९२ करोड चार्ज लिन्छिन् ।
सबैभन्दा धनि अभिनेत्रीको सूचिमा दीपिका पादुकोणको नाम सधैँ अगाडि आउँछ । उनी सन् २०१८ मा ४८ करोड कमाई गरेर १० औं नम्बरमा पर्न सफल भएकी थिइन् । तर अहिले उनको नाम चौँथो नम्बरमा पुगेकी छिन् । उनको पछिल्लो वर्षको कमाई १११.८ करोड भइसकेको छ।
अभिनेत्री तथा प्रोड्युसर अनुष्का शर्माको सन् २०१९ को कमाई २८.६७ करोड थियो । अनुष्का सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने अभिनेत्रीको सूचिमा २१ औँ नम्बरमा पर्छिन् ।
बलिउडकी अभिनेत्री कैटरीना कैफको अघिल्लो वर्ष २३.६३ करोड थियो । जसले उनलाई धनि अभिनेत्रीहरुको सूचिमा २३ औँ नम्बरमा पर्छिन् । फिल्ममा काम गर्नुका साथै उनी केही ठूला ब्राण्डका एम्बेसडर पनि हुन् ।
आज उपत्यकामा ७ सय बढी संक्रमित, देशभर हजार भन्दा बढी ! कुन जिल्लामा कति ? [विवरण…
अभिभावकको टाउको दुखाई : किन एकोहोरिदैछ बालबालिका ?
जनकपुरमा चल्ने रेलले सञ्चालन खर्च उठाउला ?
सास फेर्न कठिन भइसकेका डा गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर लग्यो
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जो-खिम कायमै रहँदा खुलेका सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गर्न जो-खिमपूर्ण बनेको छ । यस्ता…
पर्सि अर्थात् असोज ६ गते बुधले राशी परिवर्तन गर्दै, यी राशिलाई अत्यन्त…
आज उपत्यकामा ७ सय बढी संक्रमित, देशभर हजार भन्दा बढी ! कुन जिल्लामा…
गीता दर्शन : असुरी स्वभाव भएका व्यक्तिको पतन
भोलिदेखि पुन: नेपालका यी स्थानहरुमा हुनेछ हवाई सेवा सञ्चालन!
नेपाली भूमिमा चीनले ९ वटा भवन बनायो !
‘कुलमानको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, नियुक्त हुनेमा उच्च सम्भावना’
पूर्वसभामुख भन्छन् – ‘निर्वाचन पद्धतिमा सुधार नगरे लोकतन्त्र स्थिर हुँदैन’
सार्वजनिक यातायात: ‘न स्यानिटाइजर न सामाजिक दूरी कायम, भाडा…
पर्सि अर्थात् असोज ६ गते बुधले राशी परिवर्तन गर्दै, यी…
आज उपत्यकामा ७ सय बढी संक्रमित, देशभर हजार भन्दा बढी ! कुन…